Tag: tafura | Martech Zone
China, July 23, 2020 Chishanu, May 21, 2021 Douglas Karr
Sezvo maturusi mazhinji uye akawanda ari mukutengesa kwako uye kushambadzira, kuburitsa mishumo yepakati inogona kuve iri basa chairo. Vazhinji vashambadzi vandinoziva vanopedza nguva yakawanda vachiunganidza nekushandura data, vobva vagadzira nemaoko mishumo yavanoda kuti vataure nezve mushandirapamwe uye mamwe metric ekushambadzira. Funnel: Kubatanidzwa pamwe neanopfuura mazana mashanu masosi edhata Funnel inotora zvakashata, yakatumirwa data kubva kune zvese zvinyorwa kuti ibudise otomatiki Bhizinesi-Yakagadzirira Dhata inoenderana zvizere, inowirirana, uye
Snowflake Inotsanangura Mashandisiro Avakaita Shanduko Yavo neAccount-Yakavakirwa Kushambadzira #CONEX
Muvhuro, Nyamavhuvhu 20, 2018 Chipiri, August 21, 2018 Douglas Karr
Ini ndiri kumusoro kuToronto ndiri kupinda musangano weUberflip weChinyorwa Chinoitika. Nhasi, tinopedza zuva iri pamuzinda weUberflip wakanaka uye toteerera kune vamwe vakurukuri vakanaka. Chimwe chikamu chakange chakandibata zvakanyanya yaive Snowflake's ABM Director, Daniel G. Day, achitaura nemagadzirirwo aakaitwa chirongwa cheABM icho chakakwidziridzwa nemhedzisiro yekutengesa kweSnowflake. @uberfliphq yekufashukira chikamu che #CONEX iri kusvetuka! Akanaka HQ ​​pano mu #Toronto #torontotech Chinyorwa chakagovaniswa na Douglas Karr (@kudzaimedia)